superadmin – Makalu News » superadmin
लगानी गर्न रहनुहोस् तयार, हात खाली नजाने आईपीओ भोलीदेखि खुल्दै
काठमाडौं : हाल सम्मकै ठूलो आईपीओ भोली (शुक्रबार) देखि खुल्ने भएको छ । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले सर्वसाधारणका लागि माघ २ गते (शुक्रबार) देखि हालसम्मकै ठूलो साधारण शेयर निष्काशन गर्नेभएको हो । बैंकले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित दरमा ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ८ करोड कित्ता आईपीओ निष्काशन गरेको हो ।
बैंकको जारी पूँजी २० अर्ब रहेको बैंकले जारी पूँजीको ४० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्न लागेको हो । आईपीओ भर्ने सबैले पाउने छ ।
कुल निष्काशित आईपीओमध्ये ५ प्रतिशतले हुन आउने ४० लाख कित्ता तथा कर्मचारीहरुका लागि ०.२० प्रतिशतले हुन आउने १ लाख ६० हजार कित्ता शेयर छुट्टाएको छ । बाँकी ७ करोड ५८ लाख ४० हजार कित्ता शेयर सर्वसाधारणमा बिक्रीमा आउनेछ ।
बैंकको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । यस्तै नागरिक लगानी कोषले आईपीओ प्रत्याभूती (अण्डरराइट) गरेको छ ।
नेकपा विवाद हेरिरहेका निर्वाचन आयोगका सहसचिवको सरूवा
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाभित्र पछिल्लो समय देखिएको विवाद हेरिरहेका निर्वाचन आयोगका एक जना सहसचिवलाई सरकारले सरूवा गरेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आयोगको कानुन महाशाखा प्रमुख रहेका सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमको सरूवा गरेको हो।
गौतम दश महिनादेखि उक्त महाशाखामा थिए। उक्त महाशाखाले राजनीतिक दलको दर्ता, नीति नियमदेखि विवाद निरूपणको काम गर्छ। पछिल्लो समय नेकपाको विवाद पनि महाशाखाले हेरिरहेको थियो।
गौतमको ठाउँमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव पुष्कर सापकोटालाई पठाइएको छ। सरूवापछि गौतम शुक्रबार आयोगबाट बिदा हुँदै छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएको छ। दुबै पक्षले आफू आधिकारिक भएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन्।
‘संवैधानिक आयोगहरूमा कर्मचारी सरूवा गर्दा कम्तिमा आयोगहरूसँग परामर्श गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलादेखि कै कुरा हो। तर त्यसको सुनुवाइ भएको छैन,’ ती आयुक्तले भने,‘अहिले उहाँको सरूवा हुँदा पनि आयोगलाई सरूवा भएपछिमात्र थाहा भयो। यस्तो कुराले आयोगको पर्फमेन्समा असर पर्छ।’
सिरहामा मृत्यु भएका वृद्धमा कोरोना संक्रमण
सिरहामा मृत्यु भएका १ वृद्धमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) पोजिटिभ देखिएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख कृष्णदेव यादवका अनुसार ३ भदौमा मृत्यु भएका मिर्चैया नगरपालिका-४ का ६८ वर्षीय पुरुषमा शुक्रबार राति कोरोना पाजिटिभ देखिएको हो ।
ती पुरुषको २ भदौमा गाउँमै स्वाब संकलन गरिएको थियो । उनी मधुमेह र उच्च रक्तचापका बिरामी रहेका स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख यादवले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार स्वाब संकलन गरेर प्रादेशिक प्रयोगशाला पठाइएको र रिपोर्ट नआउँदै उनको ३ भदौमा मृत्यु भएको थियो । यो सँगै सिरहामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३ पुगेको छ ।
तस्बिरः विष्णु क्षेत्रीको फेसबुकबाट
सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका वडा नम्बर २ को लिदीमा शुक्रबार बिहान भीषण पहिरो गएको छ।
लिदीको लामा टोलमा बस्ती माथिबाट आएको पहिरोले १३ वटा घर पुरिएका छन् भने दर्जन बढी मानिस बेपत्ता भएका छन्।
गाउँपालिकाका योजना अधिकृत रामबाबु नेपालले बिहान साढे ६ बजेतिर पहिरो गएको जानकारी दिए।
‘पहिरो बलेफी खोलासम्म आइपुगेको छ। हामीलाई प्राप्त पछिल्लो जनाकारी अनुसार ५ परिवारका मानिस बेपत्ता भएका छन्, जसमा ३ परिवारका १३ जना बेपत्ता भएको सूचना हामीलाई छ। थप विवरण आउँदैछ’, उनले भने।
पहिरोबाट २५ परिवार प्रभावित भएका छन्। अहिले पहिरोमा परेकाको उद्धार कार्य भइरहेको उनले बताए।
बिहीबार मुलुकभर कोरोनाका ५ सय २५ संक्रमित थपिएका छन्। उपत्यकाका संक्रमितमा काठमाडौंका १११, ललितपुरका ११ र भक्तपुरका ५ गरी १२७ जना रहेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले विगत २४ घण्टामा ५ सय २५ संक्रमित थपिएको जानकारी दिए। यीसहित मुलुकभर संक्रमितको संख्या २४ हजार ९ सय ५७ पुगेको छ।
विगत २४ घण्टामा १०९ जना डिस्चार्ज भएका छन्। यीसहित हालसम्म १६ हजार ८ सय ३७ जना कोरोनाबाट निको भइ घर फर्किएका छन्।
विगत २४ घण्टामा ९ हजार बढीको पिसिआर परीक्षण भएको छ। हालसम्म ४ लाख ८३ हजारकाे पिसिआर परीक्षण भएकाे छ।
विगत २४ घण्टामा ४ मृतकमा कोरोना पुष्टि भएको गौतमले जानकारी दिए।
मोरङका ५७ वर्षीय पुरुषको कोशी अस्पतालमा, महोत्तरीका ४५ वर्षीय पुरुषको रामजानकी अस्पतालमा, धनुषाकी ८५ वर्षीया वृद्धाको बिपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा र अछामका १८ वर्षीय युवाको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ।
कोरोनाका कारण हालसम्म मृतकको संख्या ९५ पुगेको छ। मृतकमध्ये ७३ जना पुरुष र २२ जना महिला छन्।
गृह मन्त्रालयले बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी अनिश्चितकालका लागि पास वितरण रोक्न सबै जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिएको हो।
कोभिड-१९ को उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सवारी पास वितरण बन्द गरिएको गृहले जनाएको छ।
विभिन्न बहानामा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाने गरेकाले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न पास वितरण बन्द गरिएको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बताए।
‘अर्को निर्णय नहुँदासम्म एम्बुलेन्स, खाद्य तथा तरकारी बोक्ने सवारी साधनहरू बाहेक अरू गाडीहरू एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जान पाउने छैनन्’, उनले भने,’कोही बिरामी भएमा एम्बुलेन्सबाटै जान्छन्। तर अब व्यक्तिका नाममा सवारी पास वितरण हुँदैन।’
काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरलाई भने एउटै जिल्ला मानिदै आएको छ।
पछिल्लो २४ घण्टामा देशका विभिन्न ठाउँमा ४ सय ८४ जना कोरोनाका संक्रमित थपिएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सो संख्याका संक्रमित थपिएको जानकारी दिए।
काठमाडौं उपत्यकामा थप १३८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । जसमा ललितपुरमा २१ र भक्तपुरमा ८ जना छन् भने बाँकी १०९ जना काठमाडौंका रहेका छन् ।
बुधबार थपिएकासहित मुलुकभर हालसम्म कुल संक्रमितको संख्या २४ हजार ४ सय ३२ पुगेको छ।
त्यस्तै विगत २४ घण्टामा ६४ जना कोरोनाबाट निको भइ घर फर्किएका छन्। हालसम्म कोरोनाबाट १६ हजार ७ सय २८ जना निको भइ घर फर्किका छन्। हालसम्म ६८ प्रतिशत कोरोनाबाट निको भएका छन्।
हालसम्म ९१ जनाले कोरोनाबाट ज्यान गुमाएका छन्।
ललितपुरको ग्वार्कोस्थित किस्ट मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएकी एकजना महिलाको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ ।
काठमाडौं टेकुकी ७८ वर्षीया महिलाको मंगलबार राति सवा १ बजे मृत्यु भएको किस्ट अस्पतालका चिफ अपरेटिङ अफिसर अमिस पाठकले जानकारी दिए । पाठकका अनुसार ती महिलाको बुधबार बिहान नै कोरोना परीक्षण रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ ।
उनलाई यही साउन २६ गते पाटन अस्पतालले किस्टमा रिफर गरेको थियो । उनमा ज्वरो, पखाला र वान्ताको समस्या देखिएको थियो ।
‘अन्य अस्पतालले भर्ना नलिएपछि भौंतारिदा भौंतारिँदै पाटन अस्पताल हुँदै हामीकहाँ आउनु भएको थियो,’ पाठकले भने, ‘आईसीयुमा राखेर उपचार गर्दागर्दै उहाँको देहान्त भयो ।’
उनले भने, ‘किस्ट अस्पतालले कोभिड वार्ड चलाइसकेको छैन, तर हामीले कोभिड शंकास्पद विरामीलाई पनि भर्ना लिएर उपचार गर्दै आएका छौं । रिफर गर्ने हाम्रो नीति छैन ।’
बुधबार नै ललितपुरको पाटन अस्पतालमा जनकपुरकी ३८ वर्षीया एक महिलाको मृत्यु भएको छ ।
मंगलबार देशका विभिन्न ठाउँमा ६ सय ३८ जना कोरोनाका संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमितमध्ये उपत्यकामा मात्रै १३४ जना रहेका छन् । सोमबार जम्मा ४२ जना संक्रमित थपिएकोमा मंगलबार उपत्यकमा तीन गुणाभन्दा बढी संक्रमित थपिएका हुन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार विगत २४ घण्टामा ६ सय ३८ जना संक्रमित थपिएका हुन्।
यीसहित हालसम्म संक्रमितको संख्या २३ हजार ९ सय ४८ पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार विगत २४ घण्टामा विभिन्न अस्पतालबाट १ सय ७१ जना संक्रमित कोरोनाबाट मुक्त भएर घर फर्किएका छन्।
यीसहित हालसम्म १६ हजार ६ सय ६४ जना कोरोनाबाट निको भएका छन्। विगत २४ घण्टामा १० हजार ४ सय ६२ को पिसिआर परीक्षण भएको छ। हालसम्म ४ लाख ६२ हजार बढीको पिसिआर परीक्षण भएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार आज कोरोनाका संक्रिय संक्रमितको संख्या ७ हजार २ सय १ छन्।
त्यस्तै, ८३ जनाको कोरोना संक्रमणपछि मृत्यु भएको छ।
रसियाले संसारको पहिलो COVID-19 खोप भोली, 12 अगस्त सुरू गर्ने
कोरोनाभाइरस उपन्यासबाट मानिसहरूलाई बचाउन खोप खोज्ने दौडमा, विश्वभरि छ जना उम्मेदवारहरू मानव परीक्षणको चरणमा छन्।
रसियाबाट भर्खरका रिपोर्टहरूले दावी गरे कि तिनीहरूका एकजना उम्मेद्वारले मानव क्लिनिकल परीक्षणको सबै तीन चरणहरू सफलतापूर्वक पूर्ण गरेका छन्। कथित रूपमा रूसले खोप उत्पादन गर्न सुरु गर्नेछ र देशव्यापी खोप ड्राइभको व्यापक योजना बनाइसकेको छ।